Ogaden News Agency (ONA) – Mudaaharaado Ka Dhacay Qaybo Kamida Gobolka Oromada.
Mudaaharaado Ka Dhacay Qaybo Kamida Gobolka Oromada.
Posted by Wariye Qaran	/ January 13, 2018
Mudaaharaado Lagaga Soo horjeedo gumaysiga Itoobiya ayaa wuxuu ka socdaa Qaybo kamida Gobolka Oromada waxaana la kala xidhay wadooyinka soo gala magaalada Addis Ababa ee xarunta gumaysiga Itoobiya.
Mudaaharaad wadayaasha ayaa waxay wadooyinka waawayn ku jareen geedo waawayn ayagoo kala xidhay gaadiidkii wadada maraayay, Ciidanka woyaanaha ayaa waxay xakamayn la yihiin mudaaharadada iyo kacdoonka lagaga soo horjeedo waxaana u dhaqan gali wayday ilaa hada xukunkii dag daga ahaa ee ay dalka kusoo rogeen.
Xukuumada Woyaanaha ayaa waxaa intaas u sii dheer khilaaf sii daba dheeraaday oo u dhaxeeya waxa loogu yeedho EPRDF oo ah koox dulmi isku bahaysatay oo 20 kii sano ee ugu danbaysayba dhiiga shucuubta ku hoos nool daadin hayay.
Si kastaba ha ahaatee waxaan wali fari ka qod nayn kacdoonka gumaysiga lagaga soo horjeedo waxaana sugaynaa xiliga dhaw ee kooxda TPLF ee ku amar ku taaglaysa xukunka Itoobiya soo gaaban doono wakhtigeedu.
Wararkan iyo waxa kasoo kordha dib ayaan idin kala socod siin doonaa hadii Allaha awooda leh ogolaado.